Ihe na azụta Azụmahịa Akpaaka Platform | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 29, 2016 Douglas Karr
E nwere ọtụtụ usoro akpaaka ahịa N'èzí… na ọtụtụ n'ime ha na-akọwa onwe ha dị ka akụrụngwa ahịa na ngbanwe di iche di iche iche nke na akwado ya. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị na-ele ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme nnukwu mmejọ ma imefu oke ego, itinye oke oge ma ọ bụ zụta azịza kpamkpam.
Kpọmkwem na teknụzụ ahịa, anyị na-ajụkarị ajụjụ ole na ole na usoro nhọrọ ndị na-ere ahịa:
Gịnị bụ ohere ị na-ahụ na-adịghị na-na-uru nke? Ọ na-azụlite ndu? Ọnụọgụgụ na-eduga n'ịbawanye arụmọrụ ahịa? Na-enyere aka ma ọ bụ jigide ndị ahịa ugbu a? Ma obu ka obu iwelata oke oru nke ndi otu gi ma megharia ufodu ntuziaka ndi ị na-eme ugbu a.
Kedu usoro iheomume ị ga-emejuputa atumatu ma hu nsonaazụ ya? Kedu otu ngwa ị ga-esi bilie ma na-agba ọsọ iji hụ nlọghachi nke ego gị? Kedu ihe nkwụsịtụ iji kwupụta ihe ịga nke ọma?
Kedu ihe onwunwe ịkwesịrị imejuputa ma jikwaa sistemụ ahụ? Nke a bụ nnukwu ihe! Ikwesiri ime nyocha nke mmadu? Needkwesịrị ịzụlite njem ndị ahịa site na ncha? Kwesịrị ịzụlite ndebiri email gị nke gị? Mgbidi ndị mepụtara ga-arụ ọrụ ma ọ bụ na ị ga-enwetakwu mmepe iji nweta nsonaazụ ịchọrọ?
Kedu data ọ dị mkpa ka ị bido ma olee otu ị ga - esi mee nke ọma ịkwaga ma melite data njem ndị ahịa dịka omume, ịzụta, na data ndị ọzọ na - emelite? Usoro na-ezighi ezi ma ị ga - ahụ na akụrụngwa gị akpọnwụ naanị ịnwa ịgbanwe na ibu data n'etiti sistemụ.
Kedu ego ị nwere ike ịme? Ọ bụghị naanị ikikere ikpo okwu, ọ bụ ụgwọ izi ozi, ọrụ, na nkwado, mmepe ọdịnaya, mwekota na mmepe mmepe, yana ntinye, ndozi, nnwale na njikarịcha ụgwọ.
Dị ka usoro isi isi, anyị na-arịọ ndị ahịa anyị ka ha mee njem ndị ahịa ha:
nnweta - Maka ngwaahịa ọ bụla na isi mmalite ọ bụla, gịnị bụ njem nke atụmanya iji bụrụ onye ahịa? Gụnye akụrụngwa ọdịnala, akụrụngwa ozi na ntanetị. You'll ga-enwe ike ihu usoro nke kachasị arụ ọrụ, na-achụ ego kachasị, ma na-eri obere ego. Nwere ike iji iji akpaaka azụmaahịa bulie olu nke kachasị mma ma ọ bụ mezie usoro maka njem ndị na-adịghị arụ ọrụ ma baa uru.
Njide - Maka ngwaahịa ọ bụla, gịnị bụ njem onye ahịa na-ewe iji nọrọ ma ọ bụ laghachi dịka onye ahịa? Usoro akpaaka nke ire ahịa nwere ike ịbụ ngwaọrụ dị ịtụnanya iji nwekwuo njigide. Can nwere ike idokwa mkpọsa onboarding, mkpọsa ọzụzụ, ịkpalite mkpọsa dabere na ojiji, na ọtụtụ ndị ọzọ. Elelịla ihe nyiwe ndị a nwere ike inyere gị aka edebe nnukwu ndị ahịa.
Mgbasa - Kedu ka ị ga - esi mee ka ọnụ ahịa ndị ahịa dị elu maka ika gị? Enwere ngwaahịa ma ọ bụ ohere ndị ọzọ? Ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ndị ahịa ị nwere nke na-emefu ego na ndị asọmpi n'ihi na ha amaghịdị ihe ị ga-enye!
N'ime njem ọ bụla, wepụta ugbu a:
Ndị ọrụ na ụgwọ - Kedụ ihe ndị ahịa na ahịa gị ga-akwụ iji nweta onye ndu ruru eru na onye ahịa ọ bụla?
Sistemụ na Akwụ ụgwọ - Kedu usoro sistemu ebe a na-anakọta data n'ụzọ?
Ohere na nnata - Kedu ihe bụ ebumnuche ebumnuche maka njem ọ bụla yana ego ọzọ a ga-enweta site na ị na-akpaghị aka ma na-achọpụta njem ndị ahụ? Nwere ike ịchọ ịkọ atụmatụ ndị a - 1%, 5%, 10%, wdg naanị iji anya nke uche na ohere nnweta. Nke a nwere ike inye gị ikike ị ga-eji gosipụta mmefu ego.
Nwere ike ịchọ nyocha ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ gị ma nyochaa iji okwu sitere n'aka ụfọdụ ndị na-ere ahịa akpaaka ahịa. Cheta nke a, agbanyeghị, nyiwe akpaaka na-ere ahịa anaghị ebipụta mmebi ọdachi - naanị ndị ịtụnanya! Were onu ogugu jiri mkpuru nnu dika ị n’achọ ichota ikpo okwu kwesiri.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, tupu ịzụrụ ikpo okwu, ị ga-enwerịrị atụmatụ gị niile ma dị njikere itinye ya! Dị ka iwu ụlọ… ị ga-enwerịrị ihe osise ahụ tupu ọ bụ gị ga-ekpebi ngwá ọrụ, ndị na-ewu ụlọ na ihe a na-enye ha! Mgbe inwetara atumatu gị nke ọma, ị nwere ike inyocha usoro akpaaka azụmaahịa ọ bụla megide atụmatụ ahụ iji mata nyiwe ebe ị nwere ike ịga nke ọma. Anyị na-ahụ ọdịda ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ndị na-azụta ikpo okwu ma gbalịa ịgbanwe usoro ha iji kwado adịghị ike nke ikpo okwu. Wantchọrọ ka ikpo okwu dịkarịa ala na-akụda ma na-anabata akụrụngwa gị, usoro, onyinye, oge, na nloghachi na ntinye ego.
Anyị ga-akwadoro ịgbahapụ ịhapụ ịrịọ ikpo okwu gị maka ntụnye ma gaa ịntanetị iji chọta ndị ahịa. Dị ka ọ dị n'okwu eji eme ihe, a na-ahọrọkarị ntụnye na ndị ahịa kachasị nwee ọganiihu. Chọrọ iru ma gbaa ndị ahịa ọ bụla ajụjụ ọnụ iji hụ ọkwa ọrụ, nkwado, atụmatụ, mwekota, na ihe ọhụụ usoro ihe eji eme ka ahia gị na-enye ha. Mara na ị ga-anụ akụkọ ụfọdụ na-atụ ụjọ - usoro ịkpaaka azụmaahịa ọ bụla nwere ha. Tụlee ihe onwunwe gị na ebumnuche gị na nke ọ bụla n'ime amaokwu gị iji kpee ikpe ma ọ nwere ike ịkọ ọdịmma gị ma ọ bụ ọdịda gị.
Anyị nwere otu onye ahịa jikọtara ma mejuputa ọnụọgụ ọnụọgụ isii dabere na quadrant nyocha ha. Mgbe ikpo okwu dị dị njikere ịmalite ha enweghị usoro, enweghị afọ ojuju, ọ nweghịkwa ụzọ iji mata ihe ịga nke ọma nke mkpọsa ahụ n'ezie! Ha chere n’ezie na ha ga-enwe ụfọdụ usoro mkpọsa n’elu ikpo okwu nke ha nwere ike imelite ma ziga… nope. Ikpo okwu malitere dị ka shei efu.
Njikọ aka na ikpo okwu enweghị ihe enyemaka ọ bụla, ma ọ bụ naanị nkwado ndị ahịa na iji ikpo okwu. Companylọ ọrụ ahụ ga-apụ ma mee nchọpụta nke mmadụ maka ndị ahịa ha, were ndị ndụmọdụ ndụmọdụ ka ha nyere aka mepee njem ndị ahịa, wee soro ndị ndụmọdụ na-arụ ọrụ iji kwado ma melite mkpọsa ahụ. O juru ha anya na ego iji zụlite ma mepụta mkpọsa mbụ ahụ kpuchiri mmejuputa teknụzụ niile.
Tags: nnwetaakụrụngwa ahịanjigidegbasienhọrọ ndị na-ere ahịa
Monika Nwachukwu (@nkechukwunyere)
Dee 30, 2016 na 9: 39 AM
Daalụ maka ndụmọdụ ndị a, ha dị ezigbo mkpa. Ahịa akpaaka nwere ike iweta nsonaazụ dị mma, mana ndị ahịa kwesịrị ịma na ọ bụ ngwa ọrụ yana ọ gaghị arụ ọrụ na-enweghị atụmatụ na ọdịnaya. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịhọrọ ikpo okwu nke na-enye nkwado dị mgbagwoju anya n'ịtọlite ​​mkpọsa. Ọ ga-amasị m ịkwado Synerise, nke bụ ikpo okwu dị otu a. Ndị ahịa ọ bụghị naanị ịnweta atụmatụ niile, kamakwa ọzụzụ, enyemaka na ndụmọdụ.